Hyatt waxay kor u qaadeysaa faylalka tacliinta firaaqada iyadoo la iibsaneyso Kooxda Apple Leisure Group
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Hyatt waxay kor u qaadeysaa faylalka tacliinta firaaqada iyadoo la iibsaneyso Kooxda Apple Leisure Group
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Soo kabashada xoogga leh ee safarka raaxada oo ay weheliso ballaarinta juqraafiyeedka faylalka faylalka suuqa ee Hyatt waxay tilmaamaysaa guulaha mustaqbalka ee shirkadda.
Hyatt waxay ballaarineysaa qurbaannada raaxada ee raaxada leh.
Hyatt, wuxuu ku iibsanayaa Apple Leisure Group lacag dhan $ 2.7 bilyan.
Apple Leisure waxay ka hawlgashaa 100 xarumood oo raaxo leh oo loo dhan yahay oo ku kala yaal sumado kala duwan.
Kooxda hudheelka hogaamisa ee Mareykanka, Hyatt, waxay ku iibsanaysaa hawlwadeennada meelaha lagu nasto, Apple Leisure Group, lacag dhan $ 2.7 bilyan oo doollar, iyadoo ballaarineysa dalabyada xilliga firaaqada. Soo kabashada xoogga leh ee safarka raaxada oo ay weheliso ballaarinta juqraafiyeedka faylalka faylalka suuqa ee Hyatt waxay tilmaamaysaa guulaha mustaqbalka ee shirkadda.
Kooxda Leisure Apple wuxuu ka shaqeeyaa 100 goobo-dalxiis oo raaxo leh oo loo dhan yahay oo ku yaal sumado kala duwan, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, Sunscape Resorts iyo Spas oo ay weheliyaan Goobaha Sirta iyo Spas. Ku -dariddan ayaa si weyn u kordhin doonta faylalka hyatt ee raaxada ah ee Hyatt, oo durbaba si weyn ugu tiirsan suuqan.
Soo kabashada safarka raaxada waxay u muuqataa mid rajo leh. Saadaasha falanqeeyayaasha warshaduhu waxay soo jeedinayaan in habeenada qol ee ay degan yihiin hudheelada raaxada (guud ahaan 60 suuqyada waaweyn) ay la kulmi doonaan korodh sanad ka badan (YoY) sanadka 69.7 (2021%) marka loo eego miisaaniyadda (59%).
Soo -kabashada weyn ee qaybta raaxada waxay u badan tahay inay ka tarjumeyso kororka dalabka iyo sahayda qurbaannada raaxada ee 2021, waana astaan ​​rajo u leh ballaarinta Hyatt faylalka tacliimeed. Labanlaabidda dalabka dalxiiska ee Hyatt wuxuu si fiican ula jaanqaadi doonaa dalabka safarka raaxada oo kordhay intii lagu jiray muddada soo kabashada COVID-19. Iyada oo dalabka socdaalka meheraddu uu sii ahaanayo mid la sii saadaalin karo, soo iibsigaani wuxuu u oggolaan doonaa Hyatt inuu xoojiyo booskiisa suuqa la filayo inuu si dhakhso leh uga soo kabsado.
Ra'yi ururintii ugu dambeysay ee warshadaha ayaa lagu ogaaday in 28%jawaabeyaasha caalamka ay hadda leeyihiin miisaaniyad aad u sarreysa (16%) ama waxyar ka sarreeya (12%) fasaxyada, taas oo muujineysa inay jirto si cad koox macaamiil ah oo raadineysa inay kharash dheeraad ah ku bixiyaan fasaxooda xiga.
Qaar ka mid ah macaamiisha, qufulka qaranka iyo xannibaadaha socdaalka ee caalamiga ah ayaa macneheedu yahay waqti dheeri ah guriga. Tani waxay oggolaatay in la keydsado oo miisaaniyadii safarka ayaa u kordhay qaar. Sidaa darteed, socdaalayaasha qaarkood waxay diyaar u yihiin inay bixiyaan wax ka badan, iyagoo raadinaya nasashooyin raaxo leh, waxayna ku calaamadeeyaan munaasabad gaar ah safarkooda xiga.
Isbeddellada hoyga ee dhowaan waxay muujinayaan milkiileyaasha hoteellada kale oo durbadiiba ballaarinaya kaydkooda raaxada. Ogosto 2021 waxay aragtay InterContinental Hotel Group (IHG) inay ku dhawaaqday qorshayaal ay ku daahfurayaan astaan ​​cusub oo loo dalxiis tago si kor loogu qaado koritaankeeda. Marriott ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay damacsan tahay inay kordhiso dalabkeeda dalxiis ee loo dhan yahay.
Kooxda Leisure Apple waxay durba ka mid tahay hawl wadeennada dalxiiska ee ugu waaweyn fasaxyada xirmada ee Mareykanka, Mexico iyo Kariibiyaanka. Heshiiskani wuxuu kordhin doonaa 60%faylka Hyatt ee Yurub, taasoo sii xoojineysa tartanka lala galo Marriott, Hilton iyo IHG.